News Collection: मुख खोलिन् नम्रताले
टेप प्रकरणलगत्तै रेस्टुराँ व्यवसायमा सीमित भएकी नम्रतालाई साथी रेमन श्रेष्ठले बलियो साथ दिएका थिए, तर हाल नम्रता रेस्टुराँ व्यवसायमा रेमनसँग पनि अलग्गिसकेको बताइन्छ ।
सेक्स टेप प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नम्रता यो विषयमा सधैं मौन रहन चाहिन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उक्त टेप हेरेर त्यसका आधारमा समाचार बनाएको हुनाले उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्ने योजना बनाए पनि त्यो योजना त्यत्तिकै तुहियो । त्यसपछि पनि उनले यसका बारेमा कसैसँग कुरा गर्न चाहिनन् । केही समयअघि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एक अंग्रेजी अखबारमा उनले सेक्सटेप प्रकरणका सम्बन्धमा मुख खोलिन्, जसमा उनले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको बताउँदै उक्त घटनाप्रति ग्लानि नभएको बताएकी छिन् ।
अन्तर्वार्तामा भनिएको छ, 'सेक्स टेप प्रकरणपछि धेरै पक्षको जोखिम लिएर पनि नम्रताले आघात सहन सक्ने साहस बटुलेकी छिन् ।' उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएको करिब एक वर्षपछि दिइएको भेटवार्तामा भनिएको छ- 'सेक्स टेप प्रकरण छताछुल्ल भएपछि भर्खरै सुरु भएको उनको करियरमा गम्भीर धक्का पुग्यो । सेक्सटेप सार्वजनिक भएलगत्तै उनका सपोर्टर र प्रशंसकहरू नराम्रोसँग झस्किए । केही वर्षअघि सञ्चार माध्यममा नांगो तस्बिर छापिएका कारण एक नायिकाले आत्महत्या गरेको घटनालाई स्मरण गर्नुपर्ने बाध्यता नम्रताको सेक्स टेप प्रकरणले ल्याएको थियो । नम्रताले पनि तिनै नायिकाको बाटो समाउन बाध्य हुनुपर्छ भन्ने अनुमान धेरैको थियो, नम्रताले आत्महत्या गरेको समाचार पनि अफवाहका रूपमा उत्तिकै फैलिरहेको थियो ।'
'वास्तविक सेक्सटेप प्रकरणले मलाई एक प्रकारको सक दियो,' नम्रताले अंग्रेजी अखबारलाई भनेकी छिन्- 'मेरो नितान्त व्यक्तिगत क्रियाकलापको भिडियो सार्वजनिक भैसकेपछि मेरो मस्तिष्कमा पनि लाखौं सोच मडराएका थिए ।' सेक्सटेप प्रकरण सम्भ“mदै उनले भनेकी छिन्- 'उक्त घटनालाई हल्का रूपमा लिन सकिने अवस्था थिएन । विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका कारण म सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्थामा थिइन् ।'
पत्रिका लेख्छ- 'लाखौं सोच मनमा आएका कारण उनी अब के गर्ने भन्ने दुविधामा थिइन् । त्यसै बेला उनले प्रेस कन्फरेन्स गर्ने योजना बनाइन्, तर उक्त योजना स्थगित भयो । जतिबेला सेक्स टेप सार्वजनिक भयो, त्यसबेला उनी अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गरिरहेकी थिइन्, तर त्यो ढोका पनि उनका लागि बन्द भैसकेको थियो । घटनाबाट आश्चर्यचकित भए पनि परिवारले नम्रतालाई बलियो ढाडस दियो । 'यदि मेरा अभिभावक साथमा नभएका भए म मेरो अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा सफल हुन्नथेँ,' उनले भनिन् । जबकि उनका अभिभावक उच्च शिक्षाका लागि नम्रतालाई विदेशमा पठाउन चाहिरहेकै बेला उक्त घटना सार्वजनिक भएको थियो, तर अभिभावकले घटना सार्वजनिक भएलगत्तै निर्णय बदलेर नेपालमै बसेर भिडियो स्कान्डलविरुद्ध लड्न प्रेरित गरे । आफूलाई विदेश जान रोकेर परिस्थितिको सामना गर्न बाबुआमाले हौसला दिएको दाबी नम्रताको छ ।
आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातक उत्तीर्ण नम्रताले सेक्स टेप प्रकरणमा आफूलाई मुछेर बनाइएका समाचारहरूलाई पीत पत्रकारिताको संज्ञा दिएकी छिन् । 'मैले केही वर्षअघि एल्लो जर्नालिज्म पढेको थिएँ,' उनले भनिन्- 'अहिले त्यो भनेको के हो भन्ने थाहा पाएँ ।'
नेपाली समाजमा जहाँ महिलाहरू दबिएको भावना, धैर्यको जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्, उनीहरूबाट धेरै कुराको अपेक्षा मात्र राखिन्छ, त्यहाँ टेपप्रकरणले सनसनी मच्चाएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा एउटी नायिकाका रूपमा परिचित व्यक्तिले आत्मसम्मानका लागि लड्नुपर्ने उक्त घटना नम्रताका लागि महत्वपूर्ण पक्ष बनेको उनले बताएकी छिन् । नम्रताले भनेकी छिन्- 'मैले विश्वास गरेका मानिसहरूले समेत मलाई त्यो कठिन यात्रामा सहयोग गरेनन् ।'
घटनापछि नायिका एवं मोडलको उनको स्टारडमलाई तत्काल बचाउन नसके पनि उनले उक्त घटनाका कारण आत्मग्लानि नभएको बताएकी छिन् । 'मेरो के गल्ती थियो ? उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छिन्- 'कसैलाई माया गर्नु, कसैप्रति विश्वास गर्नु अथवा नायिका बन्नु वा नेपाल जस्तो पुरातन सोच भएको मुलुकमा जन्मिनु ?'
केही समयअघि बीच नेपाली क्रिकेटको ब्रान्ड एम्बेसडर भएकी नम्रताले भनेकी छिन्- अब म पुरानै लयमा र्फकने प्रयासमा छु, त्यो घटनाले मलाई आहत गरे पनि अबको जीवनमा त्यो पीडालाई आत्मसाथ गरेर होसियारीका साथ कदम चाल्नेछु ।' कुराकानीका क्रममा उनले भनेकी छिन्- 'त्यो घटनाबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएकी छु, जीवनको उतारचढावको यो श्रृंखलाले मलाई मानवीय व्यवहारका लागि सचेत गराएको छ । म अझ बढी जिम्मेवार भएकी छु । मै ले के गर्ने के नगर्ने थाहा पाएकी छु ।'